युवतीले स्त’न कसरी आकर्षक बनाउने ? जान्नुहोस तरिका – live 60media
युवतीले स्त’न कसरी आकर्षक बनाउने ? जान्नुहोस तरिका
घरेलु उपाय गरेर स्त-नको आकारलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभावकारी तवरले बढाउन सकिएला जस्तो लाग्दैन, तर कतिपय समाजमा ठूला आकारका स्त”नलाई आकर्षक मानिने भएकाले यसलाई ठूलो बनाउन महिलामाथि दबाब हुन्छ ।सौन्दर्यसँग आकार तथा आकृति जोडिने भएकाले त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसै कारणले संसारभर नै यसलाइ बढाउन वा आकर्षक देखाउन विभिन्न विधि प्रयोग हुने गरिएको देखिन्छ।
क्रिम प्रयोग गरेर यसलाइ वा मु-न्टोको मालिसले यसकाे आ-कार बढ्ने दाबी गरिए पनि यसले स्थायी रूपमा आ-कार बढ्छ भन्ने कुरा प्रमाणित छैन । केही कसरतले छातीको मांस-पेशीलाई बलियो र ठूलो बनाउँछ र यस्तो स्थितिमा स्त-न ठूलो भए जस्तो लाग्न सक्छ तर त्यसले स्त-नको कपको आकार लाई परिवर्तन गर्दैन ।
तपाईंले फोम भएको -ब्रा अर्थात् थुनचोली प्रयोग गर्नुभएको छ । याे कसैलाई देखाउनुपर्ने अ-ङ्ग नभै छोपेरै राख्नुपर्ने अ-ङ्ग विभिन्न रसायनिक औषधियुक्त मल्हमको प्रयोग अर्को उपाय हो । त्यसबाहेक यसको आकारमा वृद्धि गर्न पम्पको प्रयोग पनि निकै चर्चामा छ । शल्य चिकित्सा गरेर यसको आकार बढाउन सकिन्छ ।
तर अत्यधिक खर्चका साथै शल्य चिकित्साको कु-प्रभावको असर खप्नुपर्ने हुनसक्छ । तपाईंले फोम भएको -ब्रा अर्थात् थुनचोली प्रयोग गर्नुभएको छ । याे कसैलाई देखाउनुपर्ने अ-ङ्ग नभै छोपेरै राख्नुपर्ने अ-ङ्ग हो ।
कपडा कपास वा यस्तै कुनै वस्तुको प्रयोग गर्ने वा स्त-नलाई माथितिर उ-चाल्ने साधनहरूले आकर्षण थप्छ । महिलाहरुले आफुलाई स्वस्थ र फिट राख्नको लागि निकै मेहनत
यसलाई आकर्षक देखाउने अन्य उपाय जस्तै थुनचोली ब्राभित्र कपडा कपास वा यस्तै कुनै वस्तुको प्रयोग गर्ने वा स्त-नलाई माथितिर उचाल्ने साधनहरूले आकर्षण थप्छ । महिलाहरुले आफुलाई स्वस्थ र फिट राख्नको लागि निकै मेहनत गर्छन । तर आफ्नो स्त”नलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्नेमा अनभिज्ञ नै छन् र खासै केहि पनि गरेको देखिदैन ।
स्तन मसाजमात्रै यौ”न सामथ्र्यको लागि मात्र नभएर विभिन्न स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्ने अध्यनबाट खुल्न आएको छ । जब महिलाहरुले कसिलो लुगा विशेषगरी -ब्रा लगाउँछन तब ब्रेस्टमा लिम्फैटिक फ्लुइडको काममा रोकावट आउँछ । जसले गर्दा ब्रेस्ट र अन्डर आम्र्समा भएको लिम्फ वा लसीका फ्लुइडलाई फेरी स्टिम्युलेट गर्नका लागि मसाज गर्नु आवश्यक छ । कहिलेकाहीं स्त”नमा गाँठो बन्न जान्छ यो आफैलाई थाहा हुँदैन।
पछि त्यही गाँ-ठो विस्तारै क्या-न्सरमा परिणत हुन्छ । नियमित मसाज गर्यो भने आफैले गिर्खा वा गाँ-ठो समयमा नै पत्ता लगाउनाले तुरुन्त उपचार भई खतराबाट बच्न सहज हुन्छ । बदामको तेल तिलको तेल जोजोबा आयल वा क्यास्टर आयलले मसाज गर्नु बढी फाइदाजनक हुन्छ । यस्तै नुहाइ सकेपछि हातमा तेल लगाएर हातले स्त”न माथी गोलाकारमा मसाज गर्नुहोस् नुहाउन चाहानुहुदैन भने तातो तौलिया राखेर हल्का तातो गनुहोस् ।
यति नै भन्ने छैन तर १० मिनेट हरेक दिन सुत्नु भन्दा पहिले माड्नु लाभदायक
मसाजको मोशनलाई कम से कम ३० पटक सम्म माथी र तलको दिशामा पनि गर्नुपर्छ । साधारणतया आकार वा स्वरूपलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कुराहरुमा तन्तुको मात्रा पारिवारिक इतिहास उमेर तौल बढ्नु वा घट्नु, स्त”नको छालाको मो-टाइ वा त-न्किन सक्ने गुण रागरस हर्मो हरूकोप्रभावको विकासका क्रममा यसको आका-र र क-डापनमा पनि परिवर्तन हुन्छ । यति नै भन्ने छैन तर १० मिनेट हरेक दिन सुत्नु भन्दा पहिले मा-ड्नु लाभदायक हुन्छ । मा-ड्दै स-म्पर्क गर्दा पनि धेरै कुराको लाभ हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
← संसारकै मोटा बालक जसले यसरी घटाए आफ्नो १०८ किलो तौल (भिडियो हेर्नुस्)
बुटवलबाट काठमाडौं आउंदै गर्दा भारत्तोलनका बिश्व बिजेता रुप कार्कीको निधन →
लोकप्रिय गायिका टिका सानुले कसिन् प्रेमीसँग लगनगाँठो, हेर्नुहोस् यो खुसीले मस्किदै गरेको भिडियो